Nagu saabsan - Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
Warshadaha Qoryaha Hebei Yifan
Waxay ku taalaa Quyangqiao, Gobolka Zhengding, oo baaxaddiisu dhan tahay 6,600 mitir murabac. Kahor intaanan bilaabin ganacsigeenna caalamiga ah, Guullo waa weyn ayaa laga gaadhay dhinaca Ganacsiga ee Shiinaha.
Warshadu waxay leedahay qalab wax soo saar oo gees ah, miinshaaro elektaroonik ah, leylis lix dhinac ah oo otomaatig ah, mashiinno xarig lagu xiro oo otomaatig ah oo laga keeno Jarmalka iyo qalab kale oo baaxad leh Waxaan u hoggaansameynaa siyaasadda qaran ee ilaalinta deegaanka oo waxaannu leenahay habab bulsheed bullaacad ah. Bishii Ogosto 2019, aagga warshaddu waa la ballaariyay, qalabkiina mar labaad ayaa la dhammaystiray.
Taariikhda warshadda waxaa dib loogu eegi karaa 1985. Aasaasihii wuxuu si dhow ula socday kor u kaca horumarka qaranka wuxuuna aasaasay shirkad isku dhafan wax soo saarka iyo iibinta. Waxay noqotay shirkad wax soo saar baaxad weyn leh Shiinaha.
Waxaan bilaabaynaa inaan balaarino kooxda xeebta ee 2016, hadana waxaan leenahay koox soosaar iyo iibin bisil.
Alaabteenu waxay iibisaa adduunka oo dhan (USA, UK, Czech Republic, Poland, Israel ...) Dukaamadeenna waxaad ka dhex baari kartaa qaabab kala duwan, laga soo bilaabo casri ilaa rustic iyo wax kasta oo u dhexeeya. Qiimaha dukaamadeennu waa kuwa labaad, sidaa darteed waad hubsan kartaa inaad alaab ka heli doontid wax ka yar.
Hadafkeenu waa inaan ka dhigno macaamiisheena inay dareemaan sida ay yihiin kuwa caanka ah. Laga soo bilaabo badeecadaha aan abuurnay illaa adeegga macaamiisha, waxaan hubineynaa in wax kasta oo aan soo saarno ay yihiin tayo heer sare ah iyo in qof walba loola dhaqmo jacayl iyo daryeel. Waxaan ku dadaaleynaa inaan tusaale u dhigno inaan u oggolaano quruxdaada inay ka dhex dhalaasho oo ay ka dhex dhalaasho.
Waan ognahay in mararka qaar aanan haysan waxa aad raadineyso oo la soo bandhigo, laakiin haddii aad na siiso fursad aan ku tusno buugaag kala duwan oo laga helo alaab-qeybiyeyaashayada waxaa laga yaabaa inaan ka helno sheygaas saxda ah ee aad raadineyso Fadlan aamin in aan ku siin karno khibrada ugu wanaagsan ee wax iibsiga.
Soodhawaynta Soo Dhawaynta ah!